ओली सि'ध्याउने माधव नेपालको यस्तो योजना !
ओली सि’ध्याउने माधव नेपालको यस्तो योजना !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको महाधिवेशन सुरु हुनु पाँच दिनमात्रै बाँकी छ । महाधिवेशनको मिति साँघुरिँदै जाँदा उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उमेदवारी घोषणा गरे । आइतबार रिपोटर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गरेर रावलले उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।
एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीको विकल्प नभएको र सर्वसम्मत रूपमा अधिवेशन सम्पन्न हुने नेताहरूको दाबीकाबीच रावलले चुनौती प्रस्तुत गरेका हुन् ।महाधिवेशनका विषयमा आफूले कुराकानी गर्न खोज्दा पनि पदाधिकारीका विषयमा नेताहरूले कुरा गर्न नचाहेको उनको गुनासो पनि छ । पत्रकार सम्मेलनमा एक्लै देखिएका रावलले पार्टीमा प्यानल नबनाउने निर्णय भएकाले स्वतन्त्र रूपमा अरू नेताहरूले पनि उमेदवारी दिने उनको दाबी छ ।
एमालेका अध्यक्ष ओलीले आफू दोहोरिने औपचारिक घोषणा त गरेका छैनन् । तर, वर्तमान चुनौतीलाई पार लगाउने नेता अरू कोही नभएको नेताहरू बताउँदै आएका छन् । ओली नै एमालेको अध्यक्ष बन्ने निश्चित भएको उनीहरूको दाबी छ । “वर्तमान संकटलाई पार लगाउने नेता भनेको केपी ओली नै हो । अहिलेको अध्यक्ष उहाँ नै हो,” एमाले नेता राजेन्द्र गौतम दाबी गर्छन् ।
ओलीको विकल्प नदेखेको बताइरहँदा विद्रोही स्वाभावका रावलले उनलाई चुनौती दिने भएका हुन । उनले आफू पार्टीको नेतृत्व गर्नसक्ने भन्दै त्यसमा विश्वस्त हुन आग्रह गरेका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो: